Alifbeetada ayaa dhaaftay Apple waxayna noqotay shirkadda ugu lacagta badan adduunka | Androidsis
Intii lagu jiray sanadihii la soo dhaafay, boggaga Apple iyo gaar ahaan adeegsadayaasheeda ugu xiisaha badan, ayaa had iyo jeer leh Waxay ku faani jireen lacagta caddaanka ah ee Apple haysatay markii ay gacanta ku hayeen markasta oo ay soo bandhigaan natiijooyinkooda maaliyadeed, lacag ay ku maalgashan karaan wax iibsi ama maalgashi kasta iyaga oo aan waydiisan wax nooc amaah ah bangiyada.
Si kastaba ha noqotee, sanadkii ugu dambeeyay, waxaan aragnay sida Dakhliga Apple ayaa hoos u dhacay, maaddaama iibinta alaabteeda ugu caansan, iPhone-ka, hoos u dhacday, markaa waxay ahayd waqti in shirkado kale oo aan sidaa u saamayn is-beddelka suuqa taleefanku ka hor mari lahaa. Marka way dhacday.
Alphabet, waa shirkad ay ka mid yihiin Google, Android, YouTube iyo shirkado kale oo aan wada ognahay inay ka tirsan yihiin, ayaa dhaaftay Apple oo waxay noqotay shirkadda lacagta ugu badan haysata, iyagoo garaacaya labada Apple iyo Amazon. Xogtaan waxaa faafiyay wargeyska Financial Times kadib markii ay falanqeeyeen natiijooyinka maaliyadeed ee ay soo bandhigeen labada shirkadood maalmo kahor.
Sida ku xusan xogtan, lacagta caddaanka ah ee loo yaqaan 'Alphabet' waxay haysaa si ay u daboosho kharashaadka wax soo saarka wax soo saarka, ama kharashyada aan la filayn waa 117 bilyan oo doolar, halka lacagta ay Apple gacanta ku heyso ay tahay 102 bilyan oo dollar. Shaki la'aan, kuwani waa tirooyin cajaa'ib leh oo xaalado badan ka badan lacagta ay waddamada qaar haystaan.
Si kastaba ha noqotee, kororka lacagta caddaanka ah ee Alphabet weli ma aysan u oggolaan shirkadda inay mid kale ka noqoto shirkadaha qiimaha suuqoodu ka sarreeyo hal bilyan oo doolar, iyo halka aan maanta ka helno kaliya Apple, Microsoft iyo Amazon. Waxaan rajeyneynaa, Alphabet inuu ku biiri doono kooxdaas xulashada bilo yar gudahood, haddii ay sii waddo inay soo bandhigto natiijooyin dhaqaale oo wanaagsan, wax dad aad u yar shaki gelin karaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Xarfaha alifbeetada ayaa ka sarreeya shirkadda Apple oo waxay noqotay shirkadda ugu lacagta badan adduunka
Cusbooneysiinta EMUI 9.1 waxay u keentaa GPU Turbo 3.0 iyo teknolojiyadda EROFS Huawei P10 Plus